/ဘ‌‌လော့ခ်/ပြတိုက်/6 ခြေလှမ်းများအတွက် testosterone ဟော်မုန်း enanthate Homebrew အောင်လုပ်နည်း
အပေါ် Posted 05 / 07 / 2019 by ၏ ရေးသားခဲ့သည် ပြတိုက်.
testosterone ဟော်မုန်း enanthate အမှုန့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအားလုံးကို
1 ။ testosterone ဟော်မုန်း enanthate ကဘာလဲ
2 ။ testosterone enanthate သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှအဘယ်သို့ပြုထားခြင်း
3 ။ ခြေလှမ်းတို့က testosterone Enanthate Homebrew ခြေလှမ်းအောင်လုပ်နည်း
4 ။ ခြေလှမ်းတို့က testosterone Enanthate Homebrew ခြေလှမ်း
5 ။ testosterone ထံမှ Homebrew သင့်ရဲ့ steroids Start
ဤဆောင်းပါးသည်ကိုသင် testosterone ဟော်မုန်း enanthate Homebrew စေနိုင်ကြောင်းဘယ်လိုအသေးစိတ်ရှင်းပြချက်ကိုပေးသည်။ ဒါဟာအစ testosterone Enanthate အကျိုးကျေးဇူးများကိုပေါ်အသိပညာ။
t ကိုကဘာလဲestosterone enanthate
ဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းကာယဗလ ပို. ပို. လူကြိုက်များလာပြီနှင့်အတူ, လူတွေကသူတို့ကိုအခြားသူတွေထက်ပိုပြီးအားသာချက်အောင်မြင်ရန်ကူညီနိုငျသောအရာတစ်ခုခုများအတွက်မြျှောအပေါ်အမြဲရှိပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောဖြည့်စွက်ဥပမာအနေနဲ့ပါတဲ့လူသုံးအများဆုံး testosterone ဟော်မုန်းစတီရွိုက်၏တဦးတည်းကြောင်း testosterone ဟော်မုန်း enanthate ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတစ်ဦးအန်ဒရိုဂျင်နှင့်နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ် ဟို steroid တစ်မျိုးs.
ဒါဟာအသုံးပြုမှုအတွက်ပိတ်ပင်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်းကအများဆုံးကာယဗလအားဖြင့် Steroid တစ်မျိုးအဘို့ရှာတစျခုဖွစျဖို့ရောက်နေပါတယ်။ ကကာယဗလမှအကျိုးရှိပေမယ့်ကိုလည်းသူများလျှက်ကျား reassignment နှင့် hypogonadism ၏ကုသမှုများအတွက်, testosterone ဟော်မုန်းအစားထိုးကုထုံးအတွက်ဆေးပညာအအသုံးပြုရန်သောသူတို့အားအသုံးဝင်သည်သာ။
testosterone enanthate သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှအဘယ်သို့ပြုထားခြင်း
testosterone Enanthate ပိုမြန်ခန္ဓာကိုယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ဖြစ်ထွန်းရာတစ်ရှူးပြုပြင်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေဖြစ်ဖို့သက်သေပြခဲ့သည်။ ပရိုတိန်းများထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်ကတစ်ရှူးကိုတောင်အားကစားရုံ၌အလွန်ခက်အလုပ်လုပ်ပြီးနောက်အစာရှောင်ခြင်း recover ကူညီပေးသည်။ ရလဒ်အဖြစ်သငျသညျခက်ခဲထွက်အလုပ်လုပ်နှင့်သင့်အလုပ်၏ရလဒ်မှထွက်တွေ့နိုင်ပါသည်။
သူတို့အလုံအလောက်ကျင့်သုံးနေကြသည်နှင့်တူများစွာသောလူ, အလွန်အကျွံမစားနဲ့သူတို့ဆုံးရှုံးချင်သောခန္ဓာကိုယ်အဆီဆုံးရှုံးဘဲ, ခံစားရပေမည်နေစဉ် testosterone Enanthate ထိထိရောက်ရောက်ထိုသို့ပြုမှသက်သေပြခဲ့သည်။ အဘယ်အရာကိုအံ့သြစရာဖြစ်ပါသည်သင်ကကာယဗလမယ်လျှင်, သင်သည်သင်၏ကြွက်သားပေမယ့်သူတို့ကိုဖုံးကွယ်သောရီဖိုင်းအဆီဆုံးရှုံးမည်မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အဘယ်အရာကိုဆိုလိုသင်သည်သင်၏ကြွက်သားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်ရ, သူတို့ကပိုသတ်မှတ်ရပင်ပိုကောင်းသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒီထက်ခန္ဓာကိုယ်အဆီသင်ပုံသဏ္ဍာန်နေနှင့်ကြာကြာအသက်ရှင်နေထိုင်စေမည်။
သငျသညျကြွက်သားအဆောက်အဦးမှန်လျှင်, သင် testosterone ဟော်မုန်း enanthate ဆိုတဲ့အချက်ကိုတန်ဖိုးထားပါလိမ့်မယ် ကာယဗလအကျိုးသက်ရောက်မှုစုံလင်သည်။ ဒါဟာရိုးတွင်းခြင်ဆီထဲမှာသွေးနီဆဲလ်ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်တဦးတည်းအမြောက်အများဖွင့်ကူညီပေးသည်။ testosterone enanthate လည်းလုပ်ကွက်အတွက် cortisol အကျိုးသက်ရောက်မှု၎င်း၏အရှုံးမှဦးဆောင်ဤအရပ်မှကြွက်သား catabolizing ဖြင့်အလုပ်လုပ်စေတဲ့ဟော်မုန်း။
ပိုကြီးတဲ့အလေးရုတ်သိမ်းပေးရန်စေရန်, သင်ပိုမိုပါဝါအောင်မြင်ရန်ရှိသည်။ ကကြွက်သားထုထည်အတွက်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအကျိုးအမြတ်နဲ့ဆက်စပ်ကြောင့်အများအပြားကာယဗလသူတို့အစွမ်းသတ္တိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဘာမှမပြုကြလိမ့်မည်သည့်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုမှာဖြစ်ပါတယ်။ testosterone enanthate သင်အမြဲများအတွက်အလိုအလျောက်ထားသောအလေးချိန်ရုတ်သိမ်းပေးရန်ရန်သင့်အားဖွင့် သာ. အားထုတ်တည်ဆောက်ကူညီပေးပါမည်သောအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ steroids တစ်ခုဖြစ်သည်။
ခြေလှမ်းတို့က testosterone Enanthate Homebrew ခြေလှမ်းအောင်လုပ်နည်း
သင့်ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ခြင်း Homebrew testosterone Enanthate သင်ကရှေးခယျြသှားရာလမျးဖွစျဖို့, ရိုးရှင်းသောသို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်ဖြစ်စေ။ လူတွေအများအပြားကသိပ္ပံအများကြီးအားဖြင့်သင်တို့ကိုတားနိုငျသျောလညျးကြှနျုပျတို့ကပိုရိုးရှင်းစွာဆက်ပါလိမ့်မယ်။ ဤတွင်လိုအပ်ချက်များနှင့်သင် testosterone Enanthate စိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်နိုငျပုံပေါ်ခြေလှမ်းလမ်းညွှန်တစ်ဦးခြေလှမ်းပါ၏
testosterone Enanthate အမှုန့်: 62.5 ဂရမ်
testosterone Enanthate: ml နှုန်း 250mg
Benzyl အရက် (BA): 5ml (2%)
Grapeseed ရေနံ: 148.13ml
လိုအပ် Tools များ
တစ်ဦးချင်းစီရှိခြင်း 10 ml (လုံးအစုံတစ်ဦးထုပ်, ရော်ဘာအဆို့, နှင့်ဖလားကိုဆံ့သင့်ပါတယ်။ ) ဖလားကိုဆယ်ပါးအစုံ
တစ်ဦး 20-60 gauge အပ်ရှိကြောင်း 18mL / 21 ml ကိုပြွတ်။
တစ်ဦး 3-18 gauge အပ်နှင့်အတူ 21mL ပြွတ်
Glass ကိုလှံတံနှင့် 100mL Beaker
ခြေလှမ်းတို့က testosterone Enanthate Homebrew ခြေလှမ်း
1 Step: testosterone ဟော်မုန်း enanthate အမှုန့်စဉ်းစားပါ။
2 အဆင့်: အ beaker သို့အမှုန့်, BA ဘွဲ့များနှင့် BB Add
3 Step: တစ်ရေရေချိုးအတွက် beaker အပူ
4 Step: grapeseed ရေနံ Add
6 Step: ပယ်လှန်ထုပ်သူတို့နှင့်အတူ Crimp
1 Step: testosterone ဟော်မုန်း enanthate အမှုန့်အလေးချိန်
အဆိုပါအလေးချိန် testosterone Enanthate အမှုန့် သင် Homebrew စေရန်လိုအပ်ကြောင်းအတိအကျအရေအတွက်သုံးပြီးဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်။ အတိအကျအလေးချိန်ရဖို့, စက္ကူ၏သေးငယ်တဲ့အပိုင်းအစရရှိရန်နှင့်စကေးပေါ်မှာထားပါ။
သုညမှအတိုင်းအတာကိုသတ်မှတ်ပေးရန်အမှုန့်, စာနယ်ဇင်းတောမြိုးစေ့အလေးချိန်တဲ့အခါစက္ကူ၏အလေးချိန်မပါဝင်ပါဘူးဆိုတာသေချာစေရန်။ သငျသညျယခုသင်မဖယ်ရှားထားရန်လိုအပ်ပါတယ်စေခြင်းငှါသိပ်အားမရရှောင်ရှားရန်တဖြည်းဖြည်းအမှုန့်ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံအမှုန့်သင်အချို့ကိုသင်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည့်အခါတိုင်းပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်ဒါကြောင့်နည်းနည်းချိန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့် hack ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုထို့နောက်သင့်လက်ချောင်းသုံးပြီးစကေးအပေါ်နှိပ်ခြင်းနှင့်အရေအတွက်ကိုချပြန်လဲခွင့်ပြုအနည်းငယ်အမှုန့်ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တိကျစွာသင့်ရဲ့ 25 ဂရမ်အလေးချိန်ပြီသေချာသည်နှင့်တပြိုင်နက်ယခုသင်သွားကြဖို့ကောင်းပါတယ်။ သင် Homebrew စေရန်လိုအပ်ကြောင်းအတိအကျအရေအတွက်သုံးပြီးဖြစ်ကြောင်းသေချာဖို့ testosterone Enanthate အမှုန့်အလေးချိန်
တစ်ဦး beaker သို့ချိန်တွယ်မှုန့်ချထားပါ။
Benzyl အရက်နှင့် 2ml Benzyl Benzoate ၏ 2ml ထည့်ပါ။
Benzyl အရက်ဖြည့်စွက်၏အဓိက function ကိုတစ်ဦး sterilizing အေးဂျင့်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာအစဤအရပ်မှတစ်နေရာတည်းတွင်အပေါငျးတို့သအဆီများနှင့်မှုန်စောင့်ရှောက်ခြင်းတစ်အရည်ပျော်ပစ္စည်းအဖြစ်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်။ Benzyl အရက်လည်းအသုံးများအရည်ပျော်ပစ္စည်းဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်နှင့်တကွကြွလာသောအားသာချက်ကနာကျင်မှု့မရှိတဲ့ဆေးထိုးရှိခြင်းအတွက်အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာခြေလှမ်း optional ကိုဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့သင်ကဖြစ်စဉ်ကိုချောချောမွေ့မွေ့ပြေးချင်လျှင်, သင်က skip သင့်ပါဘူး။ အိုးတလုံးကိုရယူပါနှင့်ရေတစ်လက်မအကြောင်းကိုနှင့်အတူကဖြည့်ပါ။ အပူတစ်အရင်းအမြစ်ပေါ်မှာချထားပါ, ဥပမာ, မီးဖိုကအပူကြကုန်အံ့။
ဒယ်အိုး ယူ. ကြောင့်ထဲသို့ beaker ထားတော်မူ၏။ ရေအနည်းငယ်စင်တီမီတာသို့ဒယ်အိုးချထားပါ။ အဆိုပါအမှုန့်တခုတခုအပေါ်မှာမျက်စိ Keep ကရှင်းလင်းနီးစပ်သူရရှိသွားတဲ့တိုင်အောင်ပျော်အဖြစ်ကိုကြည့်ပါ။ တစ်ဦးကရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ဖြေရှင်းနည်းအရောအနှောယခုအရည်ကျိုကြောင်းဆိုလိုသည်။
ကစ grapeseed ရေနံ add ပြီးတော့အနည်းငယ်ဆင်းအအေးဖို့ဖွဲ့အစီအမံများအတွက်စောင့်ပါ။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်ပိုမိုလွယ်ကူ filtering လုပ်အနည်းငယ်တက်နွေးနိုင်ပါတယ်။
စပျစ်သီးအမြိုးအနှယျရေနံသယ်ဆောင်အဖြစ်ပြုမူသမျှသောသူတို့ကတခြားဆီ၏မယ်တော်သည်။ အဘယ်အရာကိုအခြားသူများထက်အသုံးပြုမှုအတွက်ကြောင့်ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်ကြောင့်ပိုမိုပါးလွှာသည်နှင့်ထုံဆေးသတ္တိလည်းရှိတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဒါ့အပြင်သူကပြုပြင်တစ်ရှူးပျက်စီးအဲဒါကိုသင်တို့အဘို့ကျန်းမာဖြစ်ပါသည်အားလုံးမျှတမှုစေရန်ကူညီပေးသည်! သငျသညျစပျစ်သီးကိုအမြိုးအနှယျရေနံကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့တစ်ဦးမတည့်တုံ့ပြန်မှုအနေဖြင့်ဆင်းရဲခံရဖွယ်ရှိမဟုတ်ပါ။
သင်လုပ်ဆောင်သင့်သည့်နောက်အဆင့်မှာဖြေရှင်းချက်ကိုသင်နှင့်အတူစစ်ထုတ်ရန်သင်သုံးမည့်ဆေးထိုးအပ်ထဲသို့ဆွဲရန်ဖြစ်သည်။ သင်သည်ကြီးမားသောဆေးထိုးအပ် (သို့) သေးငယ်သည့်တစ်ခုကိုသုံးပြီးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
သေးငယ်တဲ့ဘက်မှာအစိမ်းရောင်ဆေးထိုးအပ်ကို fix နှင့်ပြွတ်လျှောက်ထားထို့နောက်၎င်း၏အထုပ်ထဲကနေ 0.22um ပြွတ် filter ကိုပြသရန်။ တစ်ဦးအရက် swab အသုံးပြုခြင်း, အမြုံဖလားကို၏ထိပ်သုတ်နှင့်အထဲတွင်အစိမ်းရောင်ဆေးထိုးအပ်ကိုထည့်။ အဆိုပါဖလားကိုသို့ပြွတ် filter ကိုတွဲသောဆေးထိုးအပ်ထားပါ။
ဒါဟာခြေလှမ်းဟာအလွန်အရေးပါခြေလှမ်းဖြစ်တယ်, အားလုံးချော steroids ကတဆင့်သွားပါရှိရပါမည်။ ဒါဟာ filter က filtration လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းပိတ်ဆို့ရစေခြင်းငှါပုံမှန်ပါပဲ။ ရလဒ်အဖြစ်သင်ဖြစ်စဉ်ကိုအကြီးအကျယ်နှေးကွေးဖြစ်လာသည်ကိုသတိပြုမိပါလိမ့်မယ်။ ဒီတန်ပြန်ရန်, သင်စောင့်ဆိုင်းစောင့်ရှောက်ဖို့ရှိခြင်း၏နာကျင်မှုကယ်ဖို့အသစ်တစ်ခုကိုတဦးတည်းနှင့်အတူ filter ကိုအစားထိုးလိုက်ပါ။
သငျသညျ, သို့သော်, အဖြေတစ်ခုစီစစ်ရန်ခေါ်ဆောင်သွားအချိန် Steroid တစ်မျိုးအဖြစ်ထုတ်ကုန်များ၏မီလီဂရမ် / ml အပေါ်မူတည်ကြောင်းသတိပြုပါရန်လိုအပ်သည်။
testosterone ထံမှ Homebrew သင့်ရဲ့ steroids Start
testosterone Homebrew steroid တစ်မျိုး သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကအကျွမ်းတဝင်ရှိသောကြောင့်သင်နှင့်အတူမစတင်နိုင်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသဘာဝခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထုတ်လုပ်ကြောင့်, ကြီးထွားပြုပြင်နှင့်ရှင်သန်စေရန်ကူညီပေးသည်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုအနိမ့်များမှာအခါ, အဆီနှင့်အလေးချိန်တစ်ခုတိုးလည်းမရှိ။ testosterone ဖြည့်စွက်သင်အားကစားစွမ်းဆောင်ရည်, ပိုကောင်းတဲ့ခံနိုင်ရည်နှင့်ပိုမိုအားကောင်းကြွက်သားအောင်မြင်ရန်နိုင်ကအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းစီစဉ်နေကြသည်လျှင်, သငျသညျ testosterone သုံးပြီးသင့်ရဲ့ Homebrew Steroid တစ်မျိုးအောင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ Homebrew Steroid တစ်မျိုးအောင်နှင့်အတူကြွလာသောပြဿနာသင်ကသင်ထိုက်တန်တဲ့ရလဒ်ကိုပူဇော်လိမ့်မည်ဟုမယုံကြည်စေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်။ တောင်မှလက်ျာစာရွက်အောက်ပါပြီးနောက်, သင်ထုတ်လုပ်အရာကိုအလွန်ယုံကြည်စိတ်ချမှုမဟုတျပါကွောငျးတှေ့ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ရဲ့ steroids ထုတ်လုပ်သူကိုလူအတော်များများဟာတရားခွင်နှင့်အမှားနည်းလမ်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
သငျသညျလုံလောက်သောဓာတ်ခွဲခန်းကျွမ်းကျင်မှုမရှိကြပါဘူးလျှင်သင်တို့အဘို့အန္တရာယ်များဖြစ်နိုင်သည်ကြောင့်၎င်း, ပြီးတော့သင်ကဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဘယ်တော့မှသငျ့သညျ။ အဖြစ်သငျသညျကိုသာအခြေခံဓာတ်ခွဲခန်းပစ္စည်းကိရိယာများလိုအပ်ပေမယ့်သေးငယ်တဲ့ခြေလှမ်းပျောက်ဆုံးထိုးမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကနေအဓိကအားဖြင့်သင်သည်လေးနက်ကိစ္စများပေးခြင်းတက်အဆုံးသတ်နိုင်ဆောင်းပါးတွင်တွေ့မြင်။ အဆိုပါ Homebrew Steroid တစ်မျိုးများအတွက်ပြင်ဆင်မှုကြောင့်ထိုးသွင်းရှေ့တော်၌အလွန်မြုံဖြစ်သင့်သောကွောငျ့သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒါဟာသင်ပြင်ဆင်မှုကာလအတွင်းအလွန်သတိထားပါရန်ရှိသည်ဆိုလိုသည်။ အလွန်စိတ်အားထက်သန်မျက်စိရှိခြင်းမဟုတ်သငျသညျ readymade ဝယ်ကြပါပြီနိုင်ကြောင်းတစ်ခုခုထုတ်လုပ်ရန်ကြိုးစားနေစဉ်သင်ကိုယ်တိုင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
သင်သည်လက်ျာ testosterone Enanthate သောက်သုံးသောနှင့်အရည်အသွေးယူပြီးဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်မှုဖြစ်စေရန်, သင်ပြီးသားထုတ်လုပ် Steroid တစ်မျိုးရင်းနှီးမြှုပ်နှံထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာမသာလိမ့်မည်သုံးစွဲဖို့သင်တို့အဘို့ဘေးကင်းဒါပေမယ့်လည်းပိုပြီးအဆင်ပြေစေသတည်း။
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အိတ်ကပ်ထဲသို့ပိုမိုနက်ရှိုင်းတူးဖို့မလိုဘဲအားကစားရုံ၌သင်တို့၏စံပြအကျိုးအမြတ်ရရှိအတွက်အထောက်အကူဖြစ်သောကြောင့်သင့်ရဲ့ Homebrew steroids ထုတ်လုပ်အကျိုးရှိသည်။ ဒါဟာအစလူဆိုးစာရင်းပေးသွင်းဈေးကွက်ထဲမှာပေးသောအရည်အသွေးနိမ့် steroids များအတွက်ပိုကောင်းတဲ့အခြားရွေးချယ်စရာပူဇော်စေနိုင်သည်။ အထက်ပေးအကောင်းဆုံး testosterone Homebrew စာရွက်နှင့်အတူသင်တစ်ဦးအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
ဟို Steroid တစ်မျိုးနဲ့သူတို့ကို Making, ပါမောက္ခဖရန့်, စာမျက်နှာ 1-42
testosterone: action-Deficiency-လူစားထိုး, Eberhard Njeschlag, Hermann အမ် Behre, စာမျက်နှာ 330-339
TTFB; testosterone, Total, ဇီဝ, အခမဲ့, အက်စ်စက်တင်ဘာလ 19, 2017
2660 Views စာ
“ လူငယ်အရင်းအမြစ်” - NAD + & NMN ကိုနောက်ဆက်တွဲအဖြစ်
Steroids အမှုန့်ပေးသွင်းသူများအားအဆင့် ၁၂ ဆင့်ဖြင့်ရွေးချယ်ရန် Trenbolone Enanthate အမှုန့်ကိုရောစပ်ရန် Trenbololone စာရွက်ကိုအသုံးပြုပုံ